अनैतिक र अपराधीक चरित्र देखाएकोले ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्छ : विप्लव (अन्तरवार्ता)
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्तारुढ नेकपा भित्रैबाट मागिएको राजीनामाको माग सहि भएको बताएका छन् ।
विप्लवले ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, विपत्तिलाई कमाउ धन्दामा प्रयोग गर्न अनैतिक र अपराधीक चरित्र देखाएकोले हटाउनुपर्ने बताए । विप्लवले त्यसमा आफ्नो पार्टीको सहयोग रहेन समेत बताएका छन् ।
अध्यादेश प्रकरणमा ओलीले देखाएको केटाकेटीपनपछि रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा विप्लवले ओली नेतृत्वको सरकार हटाउनै पर्ने बताउँदै आफूहरु त्यसको लागि जुनसुकै राजनीतिक शक्तिसँग जस्तोसुकै सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । ।
प्रश्न: यतिखेर तपाईंको पार्टी के गर्दैछ ?
उत्तर: सिङ्गो मानव जातिलाई सताइरहेको कोरोना भइरस विरुद्ध जनजागरण सञ्चालन गर्दै जनताको सेवामा समर्पित छौं । देश कोरोनाको कहर र केपी सरकारको भ्रष्ट जहरमा परेको छ । नागरिकहरु विभिन्न ठाउँमा भोकै, नाङ्गै अलपत्र छन् तर सरकार सफलताको कोकोहोलो मच्चाउँदै छ । कोरोनाको त्रास त छदैछ केपी सरकारले विश्वव्यापी अबलम्बन गरिएको लकडाउनलाई प्रयोग गरेर कोरोनाको विपत्तिलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नु देशकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।
प्रश्न: यहाँहरुले कोरोना महाव्याधिको कारण युद्धविराम गरेको हो ?
उत्तर: सही हो, कोरोना विरुद्ध लड्नु पर्ने परिस्थितिका कारण पार्टीले सैन्य कारबाहीहरु रोक्ने निर्णय गरेको छ । तर दमन गरेमा प्रतिरोधको अधिकार कायमै छ । केपी सरकार भने यो बेलामा पनि हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्ने जस्तो अनैतिक कार्य गरिरहेको छ । भरखरै मात्र सुर्खेतबाट कमरेड हिमाललगायत देशका विभिन्न भागबाट केही कमरेडहरुलाई गिरफ्तार गरेको छ । कोरोना जागरणमा हिँडेका कमरेडहरुलाई दुःख दिने कार्य गरिरहेको छ ।
प्रश्न: कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले अवलम्बन गरेका नीति र तिनको कार्यान्वयनलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
उत्तर: देश कोरोनाको कहर र केपी सरकारको भ्रष्ट जहरमा परेको छ । नागरिकहरु विभिन्न ठाउँमा भोकै, नाङ्गै अलपत्र छन् तर सरकार सफलताको कोकोहोलो मच्चाउँदै छ । कोरोनाको त्रास त छदैछ केपी सरकारले विश्वव्यापी अबलम्बन गरिएको लकडाउनलाई प्रयोग गरेर कोरोनाको विपत्तिलाई भ्रष्टाचार गर्ने मौकाका रुपमा प्रयोग गर्नु देशकै लागि लज्जाको विषय बनेको छ ।
उत्तर: यो एकदमै उचित माग हो । देश कोरोना विपत्तिमा छ तर केपी सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । विपत्तिलाई कमाउ धन्दामा प्रयोग गर्ने अनैतिक, अपराधीक चरित्र यही देखियो । यो सरकारलाई त हटाउनै पर्छ । त्यसका लागि पुनः संयुक्त आन्दोलनको खाँचो टडकारो बनेको छ । त्यस्तो आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी जोसुकै सँग सहकार्य गर्न तयार छ । तर हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ कि यो केपी सरकारको समस्या मात्र होइन । मुख्यतः दलाल पूँजीवादी सत्ताकै समस्या हो । सरकारसँगै राज्यको परिवर्तन पनि आवश्यक छ भन्ने सच्चाइलाई सबै अग्रगामी राजनैतिक नेतृत्व र जनताले समयमै बोध गर्नुपर्छ ।
प्रश्न: कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाटकीय रुपमा अघि सारेका राजनीतिक दल विभाजन एवं संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई विधेयक र राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षर गरेर गरिएको हस्तक्षेप अनि चार दिन पनि बित्न नपाउँदै सरकारद्वारा गरिएको खारेजीको समग्र घटनाक्रमलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
उत्तर: यी सारा घटनाहरु सरकार र राज्य असफल हुनुका परिणाम हुन् । असफल भएपछि संकट मोचनका निम्ति जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्नेमा शासक र सरकार पुग्ने गर्दछन् । केपी ओली र उनको सरकारले आफ्नो असफलताको दोष अरुको टाउकोमा थोपर्न र जनतामा थोरै भए पनि भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्नेमा लागेको छ । यस्तै असफलता र संकटबाट गलत तरिकाले उम्किन्छु भन्दा फासिवाद, आराजकता र विद्रोहरु अगाडि आउने हुन् । आजको अवस्था त्यस्तै छ ।
प्रश्न: नेकपाभित्र भुसको आगोझैँ सल्कैँदै गरेको अन्तरविरोधले देश र जनतासित कत्तिको सम्बन्ध राख्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
उत्तर: निश्चय पनि सरकारी नेकपा भित्रको अन्तर्विरोध र संघर्षले जनतासँग सम्बन्ध राख्छ । सबैले बुझ्नु पर्छ केपी सरकारले प्रदर्शन गरिरहेको भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, हत्या हिंसाको मूल्य सरकारी नेकपाले त चुकाउनु परिरहेकै छ सँगै राष्ट्रले पनि चुकाउनु पर्ने छ । किनकि सरकारले जे मन लाग्यो गर्ने र सबै मुकदर्शक मात्र बन्ने हो भने देशले थप राष्ट्रघात र फासिवादका मार खप्नु पर्र्ने छ । केपी त आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न र देशै सुम्पिन पनि तयार देखिन्छन् ।
प्रश्न: नेकपाका दुई जना सांसद तथा पूर्व आइजीपीद्वारा गरिएको भनिएको तत्कालीन समाजवादी फोरमका नेता, पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तथा हालका सांसदको कथित अपहरणको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
उत्तर: यो घटनाले सत्तासिन शासकहरु नै सारा अपराधहरुका स्रोत, संचालक र संरक्षक छन् भन्ने तथ्य खोलिदिएको छ । कुर्ची बचाउन केपी सरकार कति तलसम्म गिर्दै गएको छ? यसले उदाङ्गो पार्दछ । यस्तालाई कारवाही हुनुपर्छ पनि भनिदै छ । तर कस्ले कारवाही गर्ने ? जबकि कार्यवाही गर्ने अंगका जिम्मेवार मान्छेहरु नै यी अपराधिक घटनामा संलग्न छन् । हाम्रो विचारमा जनताले बाहेक कसैले पनि यस्ता अपराधीहरुलाई कार्यवाही गर्ने हैसियत राख्दैनन् ।
उत्तर: वास्तवमा यो एउटा रोचक विषय बनेको छ । नेपालको मात्र होइन विश्व अर्थराजनीतिमै कोरनाका गहिरा एवम् मननीय असरहरु देखिएका छन् । सायद तपाईलाई याद होला कोरोना भइरसले चीनलाई भरखर समातेको समयमा एक जना पश्चिमा लेखकले काठमाडौँ पोष्टमा साभार गरिएको लेखमा चीनको कम्युनिष्ट व्यवस्था र सर्वसत्तावादी शासन र शासकका कारण चिनियाँ जनताले कोरोना भइरसबाट ठूलो क्षति भोग्नु परेको, चीनका राष्ट्रपति अरुलाई दोष दिएर बच्न खोजे पनि कम्युनिष्ट सत्तालाई फेर्ने समय आएको तर्क गरेका थिए । उनले अमेरिकामा जस्तो प्रजातन्त्रिक व्यवस्था हुनु पर्ने त्यसो भएमा कुनै समस्या नहुने तर्क गरेका थिए । तर आज के हुँदै छ ? चीनले जम्मा भोगको क्षति बराबर अमेरिकाले जम्मा केही दिनमा भोग्दै छ ।
प्रश्न: विश्वमै उथलपुथल ल्याउने कोरोना महामारीको नियन्त्रणपछि शक्ति सन्तुलनको दृष्टिबाट विश्वको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने तपाईंको विश्लेषण छ ?
उत्तर: निश्चयनै, कोरोना एउटा प्राकृतिक समस्याका रुपमा आयो तर यो दुःखद परिणाका पछाडि पूँजीवादी राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्धले पर्यावरण र समाजमा पारेका नकारात्मक प्रभावहरु धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । त्यसैगरी पूँजीवादी राज्य व्यवस्थाहरु भित्र सामाजिक उत्तर दायित्व, मानवीयता र साझा पहलकदमीमा निकै ठूला समस्याहरु देखा परे । अमेरिका, ब्राजिललगायतका देशका नेतृत्वबाट नागरिकको जीवनभन्दा पैसा ठूलो हो भन्ने जस्ता अभिब्यक्तिहरु भए । नागरिकहरुलाई समस्या परे पनि आर्थिक कारोबारमा समस्या आउन नदिनेगरी लकडाउन खोल्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु गरिए । तथ्यगत आधारले हेर्दा पनि चीन, क्युवा, जनवादी गणतन्त्र कोरिकाया, भियतनाम जस्ता देशहरुमा प्रभाव कम देखियो । यसले विश्व शक्ति सन्तुलनमा केही मात्रामा प्रभाव पार्नेमा शंका छैन । तपाईंहरुले पनि हेर्नु भएको होला अहिले पूँजीवादी अर्थराजनीतिबारे गम्भीर समिक्षा चलिरहेको छ । युरोप, अमेरिकामा पनि पूँजीवादले चल्दैन भन्ने बहस चलिरहेको छ । नेपालमै पनि यस्ता विश्लेषणहरु बुद्धिजीवीहरुले गरिरहेका छन् । यसबाट भन्न सकिन्छ विश्वको राजनैतिक प्रणालीमा पनि नयाँ हेरफेरहरु ल्याउने छ । तर तुरुन्तै या केही समयपछि भन्ने कुराको निर्धारण युरोप, अमेरिकामा हुने बहस र आन्दोलनले निर्धारण गर्ने छन् ।
प्रश्न: हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको लागि अमेरिकाले एक वर्ष पहिले एउटा विवादास्पद रणनीति (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) आक्रामकरुपबाट अघि सारेको छ । यसको पक्षविपक्षमा व्यापक एवम् गहन बहस चलिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यससम्बन्धमा तपाईंको विश्लेषण के छ ?
उत्तर: यसबारेमा हामीले पहिले नै आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेका छौं । फेरी पनि उल्लेख गर्नु पर्दा हिन्द प्रसान्त रणनीतिका केही दूरगामी प्रभाव राख्ने विशेषता छन् । प्रथमतः यो अमेरिकी सैन्य–राजनीतिक रणनीति हो । दोस्रो यसको सम्बन्ध दोस्रो विश्वयुद्ध पछि कम्युनिष्ट प्रभावलाई रोक्न खडा गरेको नेटो र प्रशान्त क्षेत्रिय सैन्य रणनीतिसँग छ । तेस्रो यसको उद्देश्य विश्व राजनीतिमा विशेषतः दक्षिण एसियामा चीनलाई रोकेर आफू आउने हो । चौथो नेपालमा चीनलाई रोक्ने रभारतलाई पनि एउटा दबावमा पार्ने छ । पाँचौं नेपालका कम्युनिष्टलाई तहसनहस पार्ने र वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिलाई बाधा हाल्ने छ । छैठौं र सबैभन्दा भयानक उद्देश्य नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा खडा गर्ने र चीनलाई घेर्ने रहेको छ । यसअर्थमा एमसीसीलाई नेपालमा स्वीकार गर्नु हुँदैन । खारेज गर्नु पर्छ । तर केपी सरकार कुनै पनि हालतमा एमसीसीलाई स्वीकारगरेर अमेरिकी निगाहमा सत्तामा बस्न चाहन्छ । तर खुसीको कुरा नेपाली जनमत, राजनैतिक धारा एमसीसीवादी राष्ट्रघाति धाराभन्दा शक्तिशाली छ । यसमा सरकारी नेकपा भित्रै चलेको संघर्ष पनि महत्त्वपूर्ण छ । हामीले स्पष्टै भनेका छौं राष्ट्रघातका विरुद्ध सबैसँग मिलेर संघर्ष गर्छौं भनेर । अहिले पनि हाम्रो नीति यही छ ।
प्रश्न: तपाईंको पार्टीले न्यूनतम कार्यक्रमको रुपमा समाजवादलाई अघि सारको छ । के यसको अर्थ नेपालले राष्ट्रिय मुक्ति र दलाल एवम् नोकरशाही पूँजीवाद तथा सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँको चरण पार गरिसक्यो भन्ने हो ?
उत्तर: तपाईको प्रश्नलाई दुई भागमा हेर्नु पर्छ । पहिलो हामीले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद संश्लेषण गरेको साँचो हो । दोस्रो राष्ट्रिय मुक्ति, दलाल एवम् नोकरशाही पूँजीवाद तथा सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँको चरण पारभइसकेको भन्ने होइन ।
प्रश्न: तपाईं चीन एउटा शक्तिशाली सामाजिक साम्राज्यवादी मुलुक होइन, त्यो चिनियाँ विशेषतायुक्त एउटा समाजवादी मुलुक हो भन्ने पार्टीको अडानलाई कसरी सिद्ध गर्नुहुन्छ ?
उत्तर: यो विषय पनि निकै गहिरो विषय हो । यहाँ दुईवटा सन्दर्भ उपयुक्त छन् । प्रथमतः चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्वयम्ले चीनको राज्य व्यवस्थालाई चिनियाँ विशेषताको समाजवाद भनेर उल्लेख गरिरहेको छ । जसलाई त्यसैरुपमा चर्चा गर्नु सही हुन्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र वैज्ञानिक साम्यवादलाई अधिकतम लक्ष्य मान्दै पनि आएको छ ।
प्रश्न: कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको विचारमा तपाईंको पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा नै प्रष्ट छैन । कृपया जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु न, तपाईंको पार्टीको तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा के हो ? त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि मुलुकको वर्तमान अवस्था अनुकूल वा प्रतिकूल के छ ? त्यसबारे तपाईंहरुको विश्लेषण के हो ?
उत्तर: हाम्रो कार्यदिशाबारे अप्रष्टता र प्रष्टता दुवै छ । दुई थरी वर्ग र मान्छेहरु प्रष्ट छन् । लाटो तरिकाले हेर्दा पनि किसान, मजदुर, बुद्धिजीवी, महिला एवं उत्पीडित समुदायले एकीकृत जनक्रान्तिलाई दलाल पूँजीवादी सत्ता फाल्ने र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था प्राप्त गर्ने कार्यदिशा हो भनेर बुझेका छन् । त्यसैगरी दलाल पूँजीपतिवर्ग, सुदखोर, कमिशनखोर, भ्रष्ट, अवसरवादी, संशोधनवादी, आत्मसमर्पणवादी, विसर्जनवादीहरुले दलाल पूँजीवादी राज्य सत्ता ढाल्ने र वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति हो भन्नेमा प्रष्ट छन् । त्यसैले त दमन र विद्रोह, हमला र प्रतिहमला, प्रतिबन्ध र प्रतिरोध चलिरहेको छ ।
प्रश्न: सन् ७० को दशकयता विश्वका कुनै पनि भूभागमा सशस्त्र संघर्ष वा क्रान्तिका प्रयत्न सफल भएका दृष्टान्त छैनन् । त्यस्ता संघर्ष या त सम्झौतामा विसर्जन भएका छन् या त तिनको निर्मम दमन भएर समाप्त पारिएका छन् । यस पृष्ठभूमिमा आजको विश्व परिस्थितिमा क्रान्तिको मूल प्रवृत्ति के हो वा हुनुपर्छ भनेर तपाईं ठान्नुहुन्छ ?
उत्तर: तपाईंले उठाएको प्रश्न आधा मात्र सत्य हो । सत्य यो हो कि ७० को दशक यता विश्व पूँजीवादी व्यवस्था विरुद्ध विद्रोह नभएको, क्रान्ति नछेडिएको र भयानक युद्ध नचलेका बर्ष नै भएनन् । लेनिनले स्थापना गरेको समाजवाद र पूर्वी यूरोपका समाजवादी सत्ताहरु ढल्दा पनि कम्युनिष्टहरुले पूँजीवादका विरुद्ध विद्रोह र क्रान्ति गर्न साथै वैज्ञानिक समाजवाद–साम्यवादको ध्वजा फहराउँन एकछिन रोकेका छैनन् । क्रान्तिका अनेकौं उतार चढाबका बावजुद विश्व पूँजीवादी व्यवस्थालाई थर्कमान पार्ने केवल एउटा मात्र शक्ति छ, त्यो हो कम्युनिष्ट शक्ति र विचार । लुटेरा पूँजीपतिवर्गलाई त्रसित पार्ने वर्ग र विचार एउटा मात्र छ त्यो हो श्रमिक वर्ग र साम्यवादी विचार ।
प्रश्न: नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, विशेषतः राजतन्त्रको समाप्ति र संघीयताको स्थापनापछि अब हिंसात्मक क्रान्तिको युग सकिएको विश्लेषण एकथरिको छ भने अर्कोतिर तपाईंको पार्टीका गतिविधि हिंस्रक भएको टिप्पणी छ । ठोस रुपमा भनिदिनु न, तपाईंको पार्टीले अपनाएको राजनीतिक नीतिको स्वरुप कस्तो हो ? यो मूलत सामरिक नीति मात्रै भएन र ?
उत्तर: माथि तपाईंको प्रश्नले थोरै भए पनि दलाल पूँजीवाद, नोकारशाही पूँजीवाद, राष्ट्रिय मुक्तिको विषय उठाएको छ । यदी पूँजीवाद र दलाल पूँजीवादलाई हिंसात्मक व्यवस्थाको चरम रुप मान्ने हो भने(जो वास्तविकता नै हो) हिंसात्मक क्रान्तिको युग सकियो कसरी भन्न मिल्छ ? जवकी दलाल पूँजीवादको जम्माजम्मी आरम्भ मात्र भएको छ ।
प्रश्न: नेकपाले भुइँतहका संगठन निर्माणसँगै उनीहरुको अगुवाइमा भूमि, जीविकासँगै राज्यको रुपातन्तरणका मुद्दा उठाएको छ ?
उत्तर: तपाईंले ठीक भन्नु भयो । राज्यको उपरिसंरचनामा केही परिवर्तन भएका छन् । तर जनताको अर्थराजनैतिक सम्बन्धमा नयाँ समस्याहरु देखा परेका छन् । जस्तोकि भूमिमा जमिन्दारी स्वामित्वको त लगभग अन्त्य भयो तर जमिनको स्वामित्व न जनताको हातमा गयो न राज्यको हातमा नै आएको छ । भू —स्वामित्व दलालहरुको हातमा गइरहेको छ । एउटै दलाल पूँजीपतिको हातमा हजारौं रोपनी जमिन पुगेको छ । किसान मजदूरको अवस्था संकटपूर्ण छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र माफियाहरुको हातमा गइरहेको छ । राष्ट्रिय स्रोतहरुको लिलामी र बेचबिखन त्यस्तै छ । यी तमाम समस्या विरुद्ध जवसहरु सक्रिय छन् ।
प्रश्न: नेकपाले अहिले राज्यलाई मात्रै फेर्न खोजेको हो कि समाजलाई पनि ? समाजलाई पनि खोजेको हो भने कहाँ कुन ठाउँमा कस्तो रुपान्तरणको प्रक्रिया जारी छ ?
उत्तर: हो, हामीले आठौं महाधिवेशनबाट संश्लेषण गरेका छौं कम्युनिष्ट पार्टीले केवल राज्य परिवर्तनको नारालाई मात्र उठाएर काम गर्नुहुँदैन । हामीले नागरिकहरुको निजी जीवन, समाजिक जीवन र राज्य सबैतिर परिवर्तन गर्ने नीति लिनु पर्छ । केवल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र बनाउने सोच्नु हुँदैन कम्युनिष्ट समाज र परिवार पनि बनाउने सोच्नु पर्छ । परिवर्तन राजनैतिक क्रान्ति पछि भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । क्रान्तिभित्रै तीनै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । यो विचारले पार्टीलाई वास्तवमै नयाँ मार्ग खोलिदिएको छ । पार्टी जीवनमा निकै राम्रा अभ्यास र परिणामहरु प्राप्त हुन थालेका छन् । तर हामीलाई केपी ओली सरकारले जनताको सेवा गर्न पनि दिएको छैन । सायद तपाईहरुलाई पनि थाहा होला जनयुद्धको ऐतिहासिक क्षेत्र कालिकोटको लालु—मालकोट—कोटवाडा—रुपसा क्षेत्रलाई जोड्ने मोटर बाटो खनिरहेको ठाउँमा प्रहरी पुगेर रोक्ने कार्य ग-यो । सरकारले त उपेक्षा ग-यो नै हामीले गर्न खोज्दा पनि गर्न दिएन । चितवन, सिन्धुली लगायतका ठाउँमा जनताका लागि बनाएका समाज घरहरु पनि जलाउने र भत्काउने गर्यो । कपिलवस्तुमा जनमुक्ति सेना र कार्यकर्ताले उत्पादन गरेको ६५ बोरा धान केपीका पुलिसहरुले लुटेर लगे ।
प्रश्न: समाज र राज्यलाई फेर्दै नेकपा जान लागेको कता हो ? समाजवादतिर ? समाजवादतिर त नेपालकै संविधानै उन्मुख छ भने संघर्ष र हिंसा किन ?
उत्तर: हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आज दलाल पूँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने नेतृत्व गर्ने हो । जुन व्यवस्था साच्चै नै समानतामूलक, मुक्त, स्वाधीन, न्यायीक, मानवीय र सभ्य हुन्छ ।
प्रश्न: विप्लव नेतृत्वको नेकपामा पार्टीको साइनबोर्ड मात्रै नयाँ कि संरचना र संस्कृति पनि नयाँ ? अरुको भन्दा भिन्न नयाँ र लोकतान्त्रिक वा जनवादी संरचना र संस्कृति के छ ?
उत्तर: अवश्य पनि पार्टी भनेको समग्र दृष्टिकोणलाई अभिव्यक्त गर्ने साधन हो । त्यसमा पनि विचारधात्मक, राजनैतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक मूल्य र दृष्टिकोणहरुलाई ठोस र बोधगम्यरुपले अभिव्यक्त गर्नु पर्छ । हामीले यी विषयमा महत्त्वपूर्ण मान्यताहरु संश्लेषण गरेर प्रयोग गर्दै गएका छौं । हामीलाई यिनै संश्लेषणले विजयी बनाउने छन भन्ने विश्वास छ ।
प्रश्न: माओवादीकै गर्भबाट जन्मिएका नेकपा नेतृत्वले संसद्वाद वा संशोधनवादमा नफँस्ने र नयाँ वर्गमा रुपान्तरित नभइ क्रान्तिकारी भइरहने कुनै प्रक्रिया र पद्धतिको प्रत्याभूति दिन सकेको छ ?
उत्तर: तपाईंको प्रश्नको तौल पक्कै पनि धरै छ । यो कुनै दैवी भविष्यवाणी जस्तो विषय त होइन तर हामीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्राप्त गरेका सफलता र असफलताका प्रचुर व्यवहारिक अनुभवका आधारमा तथ्यगत अनुसन्धान र वैज्ञानिक संश्लेषण गरेका छौं । खासगरी समाजवादी-साम्यवादी राजनैतिक विचारलाई निजी एवम् सामाजिक अर्थजीवनमा रुपान्तरण गर्न असफल हुनुमा संसदवाद, संशोधनवाद मौलाएको छ । यसको समाधान गर्दै हामीले भनेका छौं बलियो संस्थागत सामाजिक अर्थजीवन भित्र समान एवम् सम्बृद्ध निजी जीवनको निर्माण सँगै संशोधनवाद र वर्ग विचलनकारी समस्याको समाधान हुन्छ ।